नेपाल आज | नगरकोटीको ‘ज्ञ’ हु केयर्स !
नगरकोटीको ‘ज्ञ’ हु केयर्स !
आइतबार, २० जेठ २०७५ गते प्रकाशित
काठमाडाैं । हल टनाटन भरिएको थियोे । सिट कतै खाली थिएन । तर सहभागीहरू उभिएरै कार्यक्रम हेरिरहेका थिए । गत शनिबार मोक्षमा एउटा नयाँ वातावरण बनेको देखिन्थ्योे । मञ्चमा फिक्सन डिजाइनर कुमार नगरकोटी उभिएरै यताउती गरिरहेका थिए ।
बुक हिलका प्रकाशक भूपेन्द्र खड्काले पञ्चपुरुषलाई बोलाएर पुस्तकका अशंहरू वाचन गर्न लगाए । मञ्चमा राखेकोे काठको कुर्सीमा पञ्चपुरुष घिमिरे युवराज, विप्लव प्रतीक, राजन गोदार, गणेश पौडेल र राजकुमार बानियाँलाई बसाइयो । त्यसैगरी बीचको सोफामा बसिन् लेखिका सगुना शाह !
झट्ट हेर्दा साधु झैँ लाग्ने फिक्सन डिजाइनर कुमार नगरकोटीको ‘ज्ञ’ लोकार्पण कार्यक्रम पृथक् र अनौपचारिक ढगंबाट सम्पन्न भयो । किसानले प्रयोग गर्ने खर्पनलाई त्यतिबेला भने फरक ढगंबाट प्रयोग गरिएको थियो ।
खर्पनको एकातिर ‘ज्ञ’ पुस्तक थियो भने अर्कोतिर ह्विस्की राखिएको थियो । पञ्चपुरुषले ह्विस्की खोलेर पुस्तकको लोकार्पण गरे । ३ वर्षदेखि ‘ज्ञ’ सँगको अफेयरमा रहेका नगरकोटीले लोकार्पणपश्चात् भने ‘हु केयर्स’ भन्दै पाठकको जिम्मा लगाइदिए ।
पुस्तकभित्र के छ भनेर दर्शकलाई कुतुहलता जागिरहेको समयमा उनले पुस्तकभित्रका केही सिर्जनाहरू भिन्न शैलीबाट प्रस्तुत गरे । ‘रोल नं १७’ बाट सुरु गरेका उनले मन्त्रमुग्ध पार्ने गीतहरू पनि सुनाए ।
प्रस्तुतीमा उनको फरक स्टाइल थियो । उसो त लेखनमा उनको फरक स्टाइल छ नै ! त्यसैलाई पाठकहरूले नगरकोटियन स्टाइल भन्छन् । यही स्टाइलमा उनले छैटौँ कृति ‘ज्ञ’ लाई पाठकको जिम्मा लगाइदिए । ‘हु केयर्स’ भन्दै पाठकको जिम्मा लगाइसकेका उपन्यासीकालाई पाठकले कत्तिको केयर्स गर्ने हो त्यो भने उनीहरूकै हातमा छ ।